सपना छोराछोरीको कि बाबुआमाको? : विदेशको पढाइ
सपना छोराछोरीको कि बाबुआमाको? : विदेशको पढाइ
साझा अनलाईन २०७४ पौष २९ गते मा प्रकाशित 139 पटक पढिएको
जोरपाटी नयाँ बस्तीका रबिन अधिकारीको क्यानडाको भिसा इन्टरभ्यु बाँकी छ। नामीबाट ए लेभल सक्काएका उनलाई आमा बाबाले नै विदेश जान सुझाव दिएका हुन्। 'रिसर्च बेस्ड स्टडी गर्ने वातावरण नै छैन नेपालमा। मेरो घोकेर पढ्ने बानी छैन। त्यसैले ड्याडी ममले बाहिर नै जाउ भन्नु भयो,' उनले भने। रबिन क्यानडामा अर्थशास्त्र पढ्न जाँदैछन्। उनलाई ड्याडीले भनेका छन्, 'विदेशमा पढ्यो भने करियर राम्रो हुन्छ।'
केशर महलमा 'नो अब्जेक्सन लेटर' फर्म भर्न व्यस्त पाटनका सनिस महर्जनले होटल म्यानेजमेन्ट लिएर प्लस टु पढेका छन्। एसएलसी लगत्तैको योजना थियो- 'प्लस टु सक्किनासाथ विदेश नै जाने हो।' घरबाट पनि उनलाई नेपालमा बसेर काम छैन भन्ने सिकाइयो। 'बाबा मम्मीले पनि नेपालमा बसेर काम छैन। बाहिर जा भन्नुभयो। त्यसैले पोल्यान्ड जान लागेको,' उनले भने। पोल्यान्डबाट अन्य थुप्रै देश घुम्न जान सजिलो हुने सपना देखेका छन् उनले
आमासँगै अमेरिका रहँदै आएका मैतीदेवीका आकाश पौडेल भन्छन्, 'पैसा हुन्छ। जीवनशैली पनि छ तर जीवन छैन।'
आकाशले पनि विदेश जानुअघि र गएपछि भोग्न पर्ने समस्या व्यवस्थापनका लागि परामर्श दिन आवश्यक महसुस गरेका छन्। भन्छन्, 'मानसिक रुपमा तयार हुने परामर्श दिनसके म सकिएँ, खतम भएँ, बेक्कार विदेश आएँ भन्नेजस्ता भावनाको विकास नहुन सक्छ।'